FIFI RAZAKARISON (MPIZAKA STERALIM) - ROHIZO FITIA
Tsy zoviana amin'ny mpiseran'ny Pôetawebs ny MPIZAKA STELARIM satria efa nisy vitsivitsy tamin'ireo mpiombona ao aminy no efa nivahiny teto toa an'i Narilala Ravakinoro (15/10/2015), Rakotondranaivo Honore Dinah na Ny Antso (25/07/2015)... Hisy hetsika miavaka amin'ny mahazatra ataony amin'ity volana ity, anton'ny ivahinianan'i Fifi Razakarison, tomponandraikitra ao aminy, eto amintsika anio.
Faly miarahaba anao Fifi Razakarison tongasoa eto amin'ity efitry ny tapatapakahitra ity. Iza moa i Fifi Razakarison?
Faly miarahaba antsika mpankafy ny haisoratra. Misy tokoa ny hetsika ary efa tena antomotra. Izaho no tomponandraikitra voalohany ao anatin'ny MPIZAKA STELARIM na MPIangaly ZAvaKAnto Sampana TEny sy LAhabolana ary RIba Malagasy, Fidy Razakarison na fantatra amin'ny hoe Fifi Razakarison eo amin'ny kanto.
Azo ampahatsiahivina anay ve ny mombamomba ny MPIZAKA STELARIM?
Ny MPIZAKA STELARIM dia niorina ara-panjakana nanomboka ny taona 2010 teo anivon'ny sampana Malagasy ety Ambohitsaina no misy ny toerany. Ireo mpianatra ety amin'ny Oniverisite no tena mivondrona ary tsy mifidy sampana. Afaka miditra ao ihany koa anefa ireo vonona hanandratra ny haisoratra malagasy. Teny filamatry ny MPIZAKA STELARIM ny hoe: kitro hifaharan'ny fandrosoan'ny firenena ny haisoratra. Efa namokatra mpahay kanto maro ny mpizaka, anisan'ireny i Narilala, Avelo Nidor, Nofy, Aina Miolampandry, Liantsoa... Ankehitriny kosa dia manodidina ny 20 eo ho eo izahay. Marihina fa tsy tononkalo ihany no voizinay fa rehefa zavakanto eto Madagasikara toy ny hira malagasy na anivon-tany na anindran-tany, ny tantara tsangana...
Mahaliana tokoa izany fa tena manandratra ny maha malagasy amin'ny fomba rehetra ianareo. Raha te hiditra ao izany dia miresaka aminao? Inona avy ny fepetra?
Ny fidirana tsy dia hoe misy fepetra be fa takiana amin'ireo izay te hiditra kosa ny fitiavana ny zavakanto ankoatra izany, manana ny mari-pahaizana bakalôrea na tsy maintsy mandalo ny kilasy famaranana.
Mazava tsara izany. Natsidika teny am-piandohana ny hetsika hataonareo amin'ity herinandro ity. Ahoana ny momba an'io?
Misy tokoa ny hetsika izay karakarainay. Mitondra ny lohateny hoe ROHIZO FITIA. Etsy amin'ny Cemdlac ny 21 martsa 2018 ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora sy sasany. Hetsika tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny iray volan'ny poezia. Antsan-tononkalo sy tantara fohy no hoentina ao amin'io ary andraisan-dry Fanojo, Riana Fitiavana, Loufhika RJ, Tahina, Mamiratra, Fifi Razakarison... anjara, ary eo koa ireo vahiny nasaina, anisan'ireny i Fotopisaina, Aja, Elysah Mbolatiana. Haharitra adin'ny roa latsaka eo ny hetsika ary tsy hisy ny sandam-pidirana.
Araka ny lohatenin'ny hetsika dia liana avy hatrany hoe resaka fitiavana ranoiray ve noho hita ao? Hisy ve ny boky amidy amin'io fotoana io?
Mianjaika ny fitiavana avokoa izay atao rehetra ao amin'ny "Rohizo fitia" na ny hira na ny antsan-tononkalo na ny tantara fohy. Dia mbola tsy tratra ny fandraketana anaty boky aloha hatreto fa misy kosa ireo fampirantiana ireo sangan'asan'ireo mpanoratra sy poeta ato amin'ny Mpizaka izay efa nivoaka. Ary afaka mividy ihany koa fa mirary ny vidiny.
Asio fanentanana kely ary ho an'ny mpamaky mba ho tonga amin'io fotoana io e!
Manasa antsika rehetra izay mankafy haisoratra na hira na tononkalo na tantara tsangana ho avy ao amin'ny Cemdlac Analakely manomboka amin'ny 2 ora sy sasany amin'ny 21 marsa izao. Fa hitondra ny "Rohizo fitia" ho anao ny Mpizaka. Tsy misy ny sandam-pidirana fa tongava maro e!
Azonao omena andran-tsira ary ve ny mpankafy antsika mba hazoto tokoa amin'io seho io?
Indro ary tononkalo iray ho an'ny andran-tsira:
Aza miompy alika
Raha alika hanaiki-potsiny
F'izy misy tompony
Raha hiambina tanàna
Fa revy angola an-ditra
Ka zary ianao tamana
Miheno izany feony
... Alaviro ny alika
F'io dia tsisy fika
Efa lany ianao
Vao harary fo tokotriny
Izy tsy eo intsony
Nody any amin'ny tompony
Ny alika anie ka gaigy e
Tsy mifidy rehefa manina
Efa rombotra izy saingy
Tsy ianao anio no laniny e.
Fifi Razakarison 09/07/1
Mankasitraka anao. Hamaranana ny dinika, ahoana ny fahitanao ny asa soratra ankehitriny? Voafehin'ny tanora ve ny tsipelina? Inona ny olana sy vahaolana atolotrao?
Ny fahitako azy manokana dia mitombo ny mpamokatra asa soratra na tononkalo io na "sombin'eritreritra" na ny hafa. Misy fivoarany araka izany ny haisoratra malagasy. Ny hita ihany koa dia lasa miventy hevitra loatra ny tononkalo ankehitriny kanefa tsy izay no tena tanjona fa ny fomba nentinao hamoahana ilay hevitrao no takiana amin'ny atao hoe literatiora. Misy ihany koa ny tsy dia mahafehy ny fitsipiky ny teny. Ny vahaolana azo haroso? Tokony hamaky boky ankoatra ny tononkalo ny mpanoratra sy poeta fa saingy miventy ny literatiora. Faharoa, ilaina ny fifampikasohana eo amin'ny samy mpamorona. Mitondra ho an'ny fanatsarana ny asa soratra izany. Tsy tokony hisy araka izany ny miseho ho tompony fa samy mpanompon'ny poezia ny mpomorona literatiora.
Misaotra anao amin'ny sosokevitra arosonao. Misaotra indrindra nivahiny tato amin'ny Pôetawebs. Entanina ny mpamaky rehetra ho avy amin'ny alarobia 21 martsa 2018 ho avy izao eny analakely hanaraka ny antsa mitondra ny lohateny hoe "Rohizo fitia". Mirary soa ho an'ny MPIZAKA STELARIM.
Mankasitraka anao Léa Fandresena nanaiky nampiantrano anay, dia amin'ny alarobia izany mahita azy.